म भन्दा अरु शक्तिशाली को हुन सक्छ र बुबा ? - Saptakoshionline
म भन्दा अरु शक्तिशाली को हुन सक्छ र बुबा ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र १७, २०७४ समय: २:२२:५९
एक जना बुबाले आफ्नो छोराको पढाई लेखाइमा कुनै कसर बाँकी राखेनन् । आर्थिक , भौतिक ,मानसिक , बौद्धिक सबै साधन लगानी गरे । छोरो एक सफल मानिसको दर्जामा स्थापित भयो र एउटा मल्टिनेशनल कम्पनिको सि.इ.ओ. को नोकरीमा ज्वाइन्ट भयो ।बिवाह भयो । जिवन सहयात्रीको रुपमा एक असल ,शुसिल , सुन्दर कन्याले प्रवेश गरिन उसको जिवनमा । नोकरी धहरमा भएकाले श्रीमती साथमा लिएर शहर गयो ऊ ।
फोनमा आवश्यकतानुसार कुराकानी त दैनिक भइनै रहन्थे । तर महिनौ पछि बाबु चै छोरालाई भेट्न शहर गए ।बुढा सिधै छोराको अफिसमा पुगे । अफिस सभ्य र भव्य थियो । सजावट पनि त्यतिकै सुन्दर ।छोराको मातहतमा दर्जनौ कर्मचारी । यस्तो देखेर बाबुको छाती गर्वले फुलियो । भित्रभित्रै खुशीलर गदगद भए बाबु ।
छोराको निजी चेम्बरमा प्रवेश गरी सिधै छोराको कुर्सिको पछाडी गएर उभिए । र अनि छोराको काँधमा प्रेम पुर्वक हातले थमथमाउदै प्रश्न गरे ” यो संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली मानिस को हो ?”
छोराले हाँस्दै उत्तर दियो ” म भन्दा अरु को हुन सक्छ र बुबा ….?”
छोराको उत्तर सुनेर बुढा दु:खी भए । उनको सोचाईमा छोराले गर्वसाथ मलाई शक्तिशाली भन्ने छ कि ” बुबा ! संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस तपाई हुनुहुन्छ । जसले दु:ख पिडा सबै सहेएर आफ्नो खुशीलाई बिर्सेर मलाई यति शक्तिसम्पन्न बनाउनु भयो ।”
बुढा निराश भए । अदृश्य रुपमा उनका आँखाबाट आशु पनि झरे । चेंबरको ढोकाबाट बाहिर निस्किदै एकपटक पछाडी फर्केर मलिन स्वरमा छोरालाई सोधे ” साँच्चिकै के तिमी नै सर्वाधिक शक्तिशाली हो ?
छोराले खुशी हुदै जवाफ दियो :- “होइन बुबा म शक्तिशाली होइन तपाईं हो सर्बाधिक शक्तिशाली मानिस । जसले म कस्तोलाई शक्तिसम्पन्न बनाउनु भयो ।”
आश्चर्य मान्दै बुढाले फेरी प्रश्न तेर्साए ” अहिले भर्खरै तिमी शक्तिशाली थयौ । अनि फेरी मलाई शक्तिशाली भन्छौ । किन ?” यस्तो ?”
छोराले बुबालाई आफु नजिक बसाल्दै भन्यो:-” बुबा ! त्यतिबेला हजुरका हात मेरो काँधमा थिए । जुन छोराको काँधमा वा शिरमा बुबाका बलिया हात हुन्छन अनि ऊ संसारको सर्वाधिक शक्तिशाली मानिस हुदैन त ? ल अब भन्नुहोस् के मैले गलत भने ?”
बुढाका आँखाबाट बर्रबर गर्वका आँशु झारे । उनले फेरी पुन: छोराको काँधमा धाप दिदै भने ” तिमी गलत होइन एकदम सहि छौ छोरा ।”